छायादेवी–चेतनाथ गजल पुरस्कार २०७५ अनाहत गजल संग्रहलाई | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
छायादेवी–चेतनाथ गजल पुरस्कार २०७५ अनाहत गजल संग्रहलाई
भदौ ११, २०७६ बुधबार ९:२६:१ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डौ – यस वर्षको छायादेवी–चेतनाथ गजल पुरस्कार गजलकार टक गुरुङको गजल संग्रह ‘अनाहत’ ले पाएको छ ।
काठमाण्डौमा मंगलबार भएको एक कार्यक्रमकाबीच अग्रज गजलकार द्वय रवि प्राञ्जल र करुण थापा तथा छायादेवी–चेतनाथ पराजुलीले संयुक्त रूपमा यो पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको होे । गजलकार गुरुङ प्रवासमा रहेका कारण उहाँका प्रतिनिधि गजलकार लालकाजी श्रेष्ठले पुरस्कार ग्रहण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अतिथि सर्जक, अग्रज गजलकार रवि प्राञ्जलले पुरस्कार स्थापना कोषका संरक्षक जे सागरको प्रशंसा गर्दै अभिभावकलाई भार सम्झिने यो युगमा जे. सागरले आफ्ना मातापिताको नाममा यो पुरस्कार स्थापना गरेर पुण्य कार्य गरेको बताउनुभयो । अर्का श्रष्टा करुण थापाले पुरस्कृत गजलकार टक गुरुङको सिर्जना स्तरको तारिफ गर्दै अत्यन्त योग्य कृति पुरस्कृत भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
छायाँदेवी चेतनाथ गजल पुरस्कारका लागि दर्ता भएका कृतिहरुमध्ये यो वर्ष टीका आत्रेय पौड्यालको युगको संघार, नयन अधिकारीको नयनको मोड, नमिता बरालको आँगन र टक गुरुङको अनाहत मनोनयनमा परेका थिए ।
हरेक वर्ष एक उत्कृष्ट गजल कृतिलाई दिइने यो पुरस्कारको स्थापना गजलकार जे. सागरले आफ्ना मातापिताको नाममा २०७४ सालमा स्थापना गर्नुभएको हो ।
दश हजार नगद राशिसहित प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिने छायादेवी–चेतनाथ गजल पुरस्कार गएको वर्ष संयुक्त गजल संग्रह गजल इन्द्रेणी—३ ले पाएको थियो । छायादेवी–चेतनाथ गजल पुरस्कारको संयोजन बुलबुल पब्लिकेशनले गर्दै आएको छ ।